Matakkal: Duguuggaa sanyii garee Faannoon Uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru - Independent Oromia
Duulli duguuggaa sanyii ijaarsa Naannoo Amaaraa Faannoo jedhamuun, Konyaa Matakkal keessatti, Uummata Oromoo irratti geggeeffamu, Wiixata kaleessaa Fuulbana 27, 2021 Ona Dibaax, Ganda Caancoo keessatti bifa haarayaan banamuun, lubbuu fi qabeenya Oromoo irra gaaga’amni cimaan qaqqabaa jiraachuu.
Gara Lixa Oromiyaatti geeffamuu Obbo Goollicha Dheengee duubaan shirri yaadame jiraachuu kan malu ta'uu. Innis, bifuma amaleeffatameen, MKII humnoota/tikoota isaa, Obbo Goollicha irratti tarkaanfii fudhachiisuun, akka waan WBO'n ykn hawaasni Oromoo bakkasii tarkaanfii fudhateetti olola oofuun, Uummata Oromoo kutaan wal-irratti kaasuun, bu'aa siyaasaa barame irraa buufachuuf jecha, shirri dhoksaan qindaa'e jiraachuu kan malu ta'uu; kanaafis Uummanni Oromoo dammaquu fi of-qopheessuun akkaan barbaachisaa ta'uu.
Shira Uummata Oromoo gosaan wal-irratti duulchisuuf xaxamaa jiru